Kedu ihe ịzụta na Mauritius?
N'agbanyeghi mgbasa ozi nile n'inyere aka n'oru ahia n'efu, i nwere ike ịkpọ Mauritius paradaịs maka ahia ahia. Ụkpụrụ ọnụahịa ahụ dị oke ọnụ, àgwà uwe mgbe ụfọdụ na-etinye ihe dị ukwuu ka ọ bụrụ ihe a chọrọ, ọ pụkwara ịnwepụta ụdị ejiji na-ewu ewu. Ma ọ bụrụ na i kpebikwara ịjikọta obi ụtọ na ndị obi ụtọ, ya bụ ndị fọdụrụ na ntụrụndụ na ịzụ ahịa, ọ bara uru ịmara onwe gị na nuances na atụmatụ nke agwaetiti ahụ. Nke a ga - enye gị ohere ịchọta ụfọdụ ụlọ ahịa nke Mauritius.
N'ikpeazụ, paradaịs maka shopaholics dabeere na ọtụtụ obodo ukwu. N'ahịa ma na ụlọ ahịa na-arụ ọrụ iwu: ịzụ ahịa, ịzụ ahịa na ịzụ ahịa ọzọ. Ị nwere ike iwepu 20 ruo 50% nke ihe efu. Ịzụ ahịa na Mauritius ga-eme gị obi ụtọ na onye na-edozi mma, cashmere na ọtụtụ nkume dị oké ọnụ ahịa.
Ebe a na-ere ahịa na Mauritius
N'ikwu okwu banyere ebe ugwu nke àgwàetiti ahụ, nnukwu mmasị a na-adọrọ mmasị na Grand Baie , nke a na-adịghị eju anya, ebe ọ bụ na ebe a bụ ebe ndị njem nleta nzuzo. Ebe kachasị mma na Grand Baie:
Sunset Boulevard. A pụrụ iche n'okporo ámá n'okporo ámá nke ụlọ ahịa na ụdị ihe dịgasị iche iche. Ọ bụ iwu nnukwu ego.
Ukwu Baie Plaza. Ebe a na-ere ahịa bụ otu n'ime ihe kachasị mma nke dị n'akụkụ ugwu nke agwaetiti ahụ.
Ahịa Ukwu-Bay. Na ahịa nke Gran-Ba, ọ ka mma izere ịzụta uwe, n'ihi na àgwà nke ihe ndị a nwere ike ịda mbà n'obi. Otú ọ dị, nke a bụ ebe kasị mma ịzụta ihe ncheta ọdịnala na ngwaahịa.
Super U. Nnukwu hypermarket nwere ọtụtụ ọnụ ahịa ụlọ ahịa.
Ọ bụ ihe kwesịrị ịrịba ama na ọtụtụ ebe dị mma maka ịzụ ahịa na isi obodo nke Mauritius, Port Louis :
Caudan Waterfront. A na-ere ahịa ahịa nke na-eyi uwe nke ndị na-emepụta ejiji ejiji ụwa. E nwekwara benches nke ngwaahịa ndị aka.
Le Bazar Central. Isi ahịa nke isi obodo. Ọ bụrụ na mgbagwoju anya na ịchọọ maka ngwaahịa na ihe ụtọ India - nleta ọ dị mkpa.
Bagatelle Ụlọ ahịa. Ụlọ ahịa na-anọ na obere obodo Moca, nke dị kilomita ole na ole site na isi obodo. M chịkọtara n'okpuru ụlọ m ọnụ ọgụgụ nke nemerenoe ọnụ ọgụgụ nke ihe ndị a na-achọpụta nke dị elu.
Obodo ndị ọzọ maka ịzụ ahịa
Ógbè ndị dị n'ebe ọdịda anyanwụ na n'ebe ndịda nke àgwàetiti ahụ ejupụtaghị na ihe ịzụ ahịa, dị ka nke dị n'ebe ugwu . Ma ọbụna n'ebe a, ụlọ ahịa nke Mauritius agaghị emechu gị ihu. Iji ṅaa ntị n'ebe ndị na-esonụ:
Quatre-Bornes. Otu n'ime isi obodo dị na Mauritius, ebe ị nwere ike ịzụta ihe ọ bụla ịchọrọ. Ụlọ ahịa ahịa, boutiques na ahịa na-etinye uche na mpaghara Saint Jean Street na Trianon Shopping Center. Onye ọ bụla Tọzdee na Sọnde, a na-eme ihe ngosi obodo n'obodo ahụ.
Rose-Hill . Ịbịa nleta bụ ahịa dị na ya, bụ nke na - ejupụta n'ụba nke ngwongwo dịgasị iche - site na ngwa nri na mmanụ na ọla na nkume dị oké ọnụ ahịa.
Curepipe . Obodo nke abụọ kasị ukwuu mgbe isi obodo ahụ gasịrị. A na-echekwa ọtụtụ uwe na-enweghị ọrụ.
Floreal. Obodo nke ndị ọkachamara. N'ebe dị n'etiti ị nwere ike ịzụta ngwaahịa ndị e ji akwa na ajị anụ dị mma.
Mahébourg . A ahịa jupụtara na mmụọ nke India na Mauritius. Chọta ebe a ị nwere ike ịnweta ezigbo ngwaahịa nke ọdịbendị India - ngwa nri, mmanụ, ihe oriri na ihe ndị ọzọ.
Flic En Flac . Obodo ọzọ na-ewu ewu na-eme njem nleta. A na-ezubere maka ịzụta ihe ncheta na uwe maka osimiri .
Kedu ka ụlọ ahịa si arụ ọrụ na Mauritius?
Dị ka a na-achị, ụlọ ahịa niile na-emeghe site na 9.00 ruo 17.00 site na Monday ruo Friday. Na Saturday, na mgbe ụfọdụ na Thursday, oge ọrụ na-erughị 12.00. Na Sọnde naanị nnukwu ụlọ ahịa na-arụ ọrụ.
Elegharala eziokwu ahụ anya na agwaetiti ahụ nwere usoro ego n'efu. Idebe iwu ụfọdụ mgbe ị na-azụrụ, ị nwere ike iweghachite pasent 15 nke ego nke ngwaahịa. Ma, ihe ị ga-enweta na mpaghara ọrụ n'efu, mgbe ị gafechara ikike paspọtụ. Ọ bụ ya mere i kwesịghị ịtụkwasị ụlọ ahịa na ndị ahịa na-ere ahịa anya na-enye ịzụta ngwongwo site na katalọgụ. Ịgafe njikwa njem paspọtụ, ị na-agba ọsọ maka ịzụrụ "cat na ihe dị ọcha," na ọ gaghị enwe onye ga-aza ajụjụ ma ọ dịghị oge.
Oge na Morocco
Ogige ntụrụndụ National nke Tanzania
Kedu caviar ka mma - chum ma ọ bụ salmon pink?
Ugbo ahihia nke Korean - uzommeputa
Uro si na herpes na egbugbere ọnụ
Uwe uwe elu
Ọrịa ọrịa vertebral - otu esi ewepu isi ọwụwa kpamkpam?
Ụgbọ njem nke Argentina
Ụlọ ọrụ Petronas
Esi esi nweta Smesharikov?
Werewolves - hà na-adị na ndụ n'ezie?
Taurus na Gemini - ndakọrịta na ndụ dị iche iche
Demi Moore zutere Tobey Maguire
Ntị na-adịghị agbanwe agbanwe
Peritonitis - mgbaàmà
Gbasaa na mgbidi